Kabtankii Hore Ee Man Utd Neville: Lingard Waxay Ahayd Inuu Isaga Tago Kooxda
HomeWararka CiyaarahaKabtankii hore ee Man Utd Neville: Lingard waxay ahayd inuu isaga tago kooxda
September 21, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United kabtan Gary Neville ayaa sheegay in Jesse Lingard uu isaga kooxda.
Lingard ayaa ka soo kacay kursiga keydka Axadii si uu u dhaliyo gool soo daahay kulankii West Ham halkaasoo uu amaah ku qaatay qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore.
Neville ayaa yiri intii lagu guda jiray muuqaalkii laga duubay Sky Sports: “Wali waxaan ku adkeysanayaa inay tahay inuu baxo laakiin wuxuu yeelan doonaa daqiiqado.
“Waan ku faraxsanahay inaan arko sida uu dib ugu soo laabtay ka dib wixii ka dhacay Yurub bartamihii isbuuca.
“Inaad dib u soo kabato oo aad dhaliso qofka guuleysta waxay u tahay daqiiqad fantastik ah, wuxuu leeyahay dabeecad wanaagsan, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waxaan dareemayaa inay tahay inuu ciyaaro 40-45 kulan xilli ciyaareedkii.
“Taas kuma heli doono United marka la eego 90-ka daqiiqo ee uu ku soo bilaaban doono laakiin waa mid ka mid ah ciyaartooyda aan dareemayo in United ay ka faa’ideysan doonto helitaanka.
“Kaliya waxaan u maleeyay Jesse laftiisa, waxay ahayd inuu baxo,